I-Eucalipto Private App w Garden & City View
Quezaltenango, Quetzaltenango, i-Guatemala
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Rosita
I-Eucalipto Apartment itholakala kwenye yezintaba ezizungeze iXela, amabhlogo ayi-8 nje ukusuka eCentral Park. Yindawo ekahle yokuhlola i-Xela izinsuku ezimbalwa. Igumbi lokulala linombhede omusha ophindwe kabili onemibhede ethokomele. Kunendlu yokugezela eneshawa eshisayo futhi unekhishi lakho. Ekamelweni lokuphumula kukhona usofa osebenza njengendawo eyengeziwe yokulala. Ingadi okwabelwana ngayo inombono omuhle wedolobha! Kukhona i-wifi engu-10 MB, ikhofi yamahhala netiye. Siyakwamukela!
I-Eucalipto iyifulethi enakho konke okudingayo njengomhambi oyedwa, umbhangqwana noma iqembu labathathu. Kukhona igumbi lokulala elinombhede wabantu ababili, igumbi lokugezela elinombhede usofa, igumbi lokuphumula nekhishi. Itholakala kwenye yezintaba ezizungeze i-Xela, cishe i-200m phezulu entabeni ukusuka esigcawini sase-San Antonio kwelinye lamajika e-Diagonal 16. Kusukela engadini, owabelana ngayo nezakhamuzi zamanye amafulethi amabili esakhiweni , ube nombono omuhle phezu kwedolobha. Nokho usengamabhulokhi angu-8 ukusuka epaki elimaphakathi. Ngakho-ke indawo ephakathi nendawo ekahle phakathi kwendawo emaphakathi nekotishi elisezintabeni. Uphumile esiphithiphithini kodwa usaseduze nezindawo zokudlela, izimakethe, izikole zaseSpain, ukuyothenga kanye nempilo yasebusuku.
Ifulethi linendawo yokulala yesimanje futhi evulekile enombhede oyisicathulo ophindwe kabili kanye namalineni acwebile. Kunekhabethe lokugcina izinto zakho kanye nehitha encane kagesi ebusuku obubandayo. Siphinde sihlinzeke ngamathawula, insipho kanye ne-shampoo. Ngenxa yokuthi ifulethi libhekene nedwala, lihlehlisiwe ukusuka emgwaqeni, cishe awukho umsindo wethrafikhi.
Kunendlu yokugezela eyingqayizivele lapho ushawa khona eduze kwezintaba okwakhiwe kuzo indlu. Kunendlu yangasese kanye neshawa kagesi enamanzi ashisayo.
Ungakwazi ukulungiselela ukudla kwakho okuthandayo ekhishini ngesitofu esinohhavini, isiqandisi esincane, umenzi wekhofi negedlela kanye nawo wonke amabhodwe namapani ozowasebenzisa. Kukhona ikhofi kanye netiye mahhala futhi ungasebenzisa amanzi okuphuza aphuma ku-Ecofiltro.
Kukhona itafula elincane lokudlela noma lokufunda incwadi yakho noma ungakhululeka phezu kombhede kasofa ekamelweni elincane lokuphumula.
Kukhona i-WiFi esheshayo engu-10MB kulo lonke efulethini. Ukupaka akufakiwe, kodwa kunezinketho ezimbalwa zokupaka eduze ngezindleko ezincane ezengeziwe.
Uzothola owakho ukhiye lapho ufika, ukuze ukwazi ukuza futhi uhambe ngokuthanda kwakho.
Leli fulethi likwelinye lamagquma azungeze iXela, kodwa lisaseduze nendawo. Amamitha angu-200 ekwehleni ukusuka efulethini kunepaki ejabulisayo 'iSan Antonio' enezithombe zasezindongeni kanye nesonto. Izinyathelo ezimbalwa ukusuka lapho uzothola izitolo ezilula zezidingo zakho eziyisisekelo. Futhi useseduze neCentral Park, amabhlogo ayi-8, lapho uzothola khona izinhlobonhlobo zezindawo zokudlela, imigoqo kanye nezindawo zokudlela.
URosita Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Quezaltenango namaphethelo